नेपाली काव्यमा इभान मिनाएभ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नेपाली काव्यमा इभान मिनाएभ
बुद्धको भूमिबाट ल्याएको कुनै बुद्धोपदेश भए सुन्न पाऊँ भन्ने टाल्सटायको अनुरोधमा मिनाएभ गोजीबाट सानो टिपोट झिकेर अवलोकितेश्वरको स्तुति पढेर सुनाउँछन्
माघ १, २०७८ श्याम उपाध्याय
लामो समयदेखि रुस बसेर नेपाली भाषाको सेवा गरेका साहित्यकार, रेडियो मास्कोको नेपाली कार्यक्रमका पूर्वसञ्चालक कृष्णप्रकाश श्रेष्ठको गत वर्ष ०७७ चैतमा कोरोना संक्रमणबाट निधन भयो । उनकी श्रीमतीको दुई वर्षअघि नै निधन भइसकेको र दुई वयस्क छोरीहरू पनि अलग्गै बसेकाले जीवनका अन्तिम घडीमा उनले गरेका सिर्जना उसै हराउने हुन् कि भन्ने चिन्ता साहित्यकारहरूले गरे ।
चिन्ताको सम्बोधन गर्दै आफन्त र परिवारका निकटतम सदस्य तथा मित्रहरूबाट रुसमा कोरोना संक्रमण उच्च रहेकै अवस्थामा पनि मास्को गएर उनीद्वारा संकलित साहित्य जोगाएर राख्ने, पाण्डुलिपि खोज्ने र तयार अवस्थाका रचना प्रकाशित गर्ने प्रयास भयो । भर्खरै कृष्णप्रकाश श्रेष्ठको अन्तिम काव्य ‘मिनाएभको नेपाल यात्रा’ गैरआवासीय नेपाली संघ, रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्द्वारा काठमाडौं र मास्कोमा एकैसाथ प्रकाशित भएको छ । पात्रहरूको संवाद अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ ।
काव्यका चरित्रनायक इभान मिनाएभ नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो रुसी हुन् । उनी विसं १९३२ वैशाखतिर नेपाल आएका थिए । उनी सामान्य यात्री नभएर रुसमा प्राच्यविद्याका धुरन्धर विद्वान् थिए । तत्कालीन रुसी साम्राज्यको जारशाही दरबारमा मिनाएभलाई उच्च भारदारी सम्मान प्राप्त थियो । उनी सेन्ट–पिटर्सबुर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, संस्कृत र पालिलगायत विभिन्न भाषाका विशेषज्ञ र बुद्धधर्मका प्रकाण्ड विद्वान् थिए । उनले नेपाललगायत त्यसबेला ब्रिटिस राजअन्तर्गतको हिन्दुस्तान, लंका र बर्माको भ्रमण गरेका थिए, जसको मुख्य उद्देश्य यी क्षेत्रमा बुद्ध धर्मको अवस्था र भिन्नतासाथै यहाँका भाषा तथा साहित्यबारे जानकारी लिनु थियो । मिनाएभको नेपाल यात्राको सिलसिला एक रोचक कहानी थियो । राणाकालमा युरोपेलीहरूका लागि नेपाल भ्रमण अनुमति पाउन सहज थिएन । उनी भारत आइपुग्दा बेलायत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा घोडाबाट लडेर बम्बईमा नै रोकिएका छन् भन्ने खबर पाए । त्यसै मौकामा उनले जंगबहादुरलाई भेटे र नेपाल भ्रमणको अनुमति प्राप्त गरे ।
यात्राबाट फर्केपछि मिनाएभले ‘भारत तथा लंका वृत्तान्त’ नामक संस्मरण प्रकाशित गरे, जसमा एक अध्याय नेपाल थियो । उनले केही बौद्धग्रन्थ र नेपाली तथा नेवारी साहित्यका कतिपय कृतिको अनुवादसमेत गरेका थिए । तत्कालीन राणा शासनले उनलाई काठमाडौंबाहेक अन्यत्र घुम्ने अनुमति दिएको थिएन, तर काठमाडौं बसाइको छोटो समयमा पनि नेवारी भाषा सिकेर उनले एक शब्दकोश तयार पारेका थिए । आफ्ना अनेक कृतिको माध्यमबाट रुसमा उनले नेपाल विद्याको स्थापना नै गरे । र, रुसीहरूका लागि मिनाएभ नेपाल ‘पत्ता लगाएका’ विद्वान् बने । मिनाएभ नेपाल आइपुग्दाको कालखण्डको चित्रण गर्दै काव्यमा लेखिएको छ :
जतिखेर पुगे घुम्दै नेपालमा मिनाएभ,
चारैतिर अँध्यारोले घेरिएको थियो सब ।
झोमोलुङ्मा त्यतिखेर एभरेस्ट भनिन्नथ्यो,
‘नेपाल बुद्धको जन्मस्थल’ भन्ने गरिन्नथ्यो ।
यस काव्य रचनापूर्व पनि कृष्णप्रकाशले मिनाएभबारे विभिन्न लेख र अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र प्रकाशित गरेको पाइन्छ । सम्पूर्ण वयस्क जीवन रुसमा नै बिताएकाले नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो रुसीप्रति उनको विशेष रुचि रहनु स्वाभाविक थियो । उनकै सक्रियतामा विसं २०६७ मा काठमाडौंबाट ‘मिनाएभ र नेपाल’ शीर्षकको लेखसंग्रह प्रकाशित भएको थियो । ‘रुसमा नेपाल विद्याको श्रीगणेश’ नामक अर्को लेखमा कृष्णप्रकाशले नेपालको जनजीवनबारे रुसमा परिचय दिने कार्यमा मिनाएभले पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानको चर्चा गरेका छन् । मिनाएभप्रति समर्पित कृष्णप्रकाश श्रेष्ठका लेखमा नेपालका मानवतावादी साहित्यकार जयपृथ्वीबहादुर सिंहको नाम पनि उल्लेख छ, जो रुस–यात्रा गर्ने प्रथम नेपाली थिए । यी दुईको नाम जोडेर मास्कोमा स्थापना भएको ‘जयपृथ्वी–इभान मिनाएभ’ नामक श्रष्टा सम्मान हालसम्म सात जना नेपाली साहित्यकारलाई प्रदान गरिसकिएको तथ्य पनि यसै काव्यको भूमिकामा उल्लेख छ ।
मिनाएभको नेपाल यात्रा ऐतिहासिक काव्य हो । काव्यले चित्रण गरेको कालखण्ड त्यसबेलाको हो, जब भारत बेलायतको उपनिवेश थियो र नेपाल औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजय बेहोरेपछि उसैको प्रभुत्वमा बाँधिएको थियो । नेपालमा राणा शासनको स्थापना भइसकेको थियो र जंगबहादुर आफ्नो शासनको सुरक्षाका लागि हिन्दुस्तानमा रहेको ब्रिटिस शासनसँग मित्रता बढाइरहेका थिए । बाह्य सम्बन्ध बेलायतको नियन्त्रणमा थियो र नेपालबारे बाँकी संसारलाई कमै ज्ञान थियो । देशमा गरिबी, अज्ञानता र निरक्षरता व्याप्त थियो । काठमाडौंभित्र लिच्छविकाल र मल्लकालको अन्त्यपछि आर्थिक तथा सामाजिक विकास शून्य थियो । दास प्रथा, सती प्रथा कायमै थिए । सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछौटे देश नेपाल सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न हुनाको कारणबारे काव्यमा काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टसँगको भेटमा मिनाएभ भन्छन् ः
हो यो स्वाभाविकै, जीत गोर्खालीको यहाँ भयो,
किन्तु संस्कृतिको जीत नेवारजातिमै रह्यो ।
भोट, चीन र जापानसम्म नेवार संस्कृति,
लिएको छ नेवारी वास्तुकला हुँदै कृति ।
यो कुरा बुझी मिनाएभले बाँकी यात्रा काठमाडौं उपत्यकाको वास्तुकला, मठ–मन्दिर, विभिन्न चैत्य र नेवारी भाषा तथा संस्कृतिको अध्ययनमा बिताएका थिए । यसका लागि उनलाई नेपाली पथप्रदर्शक गुणानन्द वैद्यले सघाउँछन्, जो काव्य रचनाकारका अनुसार कुनै काल्पनिक पात्र नभई वास्तवमै एक विद्वान् थिए । उनैले न्यातपोल कहलिएको भक्तपुरको नेपाली वास्तुकलाको अचुक प्रतिनिधि अत्युच्च मन्दिर, ललितपुर राजप्रासाद सामुको कलात्मक कृष्णमन्दिर र काठमाडौंको तलेजु मन्दिरबारे रुसी पाहुनालाई विस्तारमा बताउँछन् । विदेशीका लागि पहिल्यैदेखि रहस्य र आकर्षणको केन्द्रमा रहेकी जीवित देवी कुमारीको उद्गमबारे विद्वान् पात्र गुणानन्दले गरेको वर्णनलाई काव्यमा यसरी उतारिएको छ ः
सिम्रौनगढका राजा भागी नेपाल आउँदा,
साथमा तुलजादेवी आई यहीं रहिन् सदा ।
मल्लराजाहरूकी ती कुलदेवी पनि थिइन्,
भनिन्छ, तिनका साथ पासा समेत खेल्दथिन् ।
यस काव्यमा प्रस्तुत गरिएका एक अर्का पात्र भक्तपुर पुर्खौली घर भई थानकोट आएर बसेका भाजुकुटु अमात्यले मिनाएभलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान–नामहरू कसरी बने भनेर तिनीहरूको मीठो वर्णन सुनाउँछन् । उदाहरणका लागि नेवारी नाम थक्वाः अर्थात् ‘थव’ – ‘माथि’ र ‘क्वाथ’ – ‘किल्ला’ बाट थानकोट बनेको, अशोक पुत्री चारुमतीले निर्माण गरेको विहार (चारुमती विहार) बाट चाबहिल बनेको र दहोच्चगिरिबाट गोर्खाका राजाको किल्ला दहचोक बनेको जस्ता तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।
काव्यका केही दृश्य मिनाएभ यात्राबाट फर्केपछिका छन्, जसमा उनले नेपालबारे रुसमा भनेका–लेखेका कुरा वर्णन गरिएको छ । त्यस खण्डको सबैभन्दा रोचक पक्ष विश्वविख्यात साहित्यकार लियो टाल्सटायसँग उनको भेट र संवाद हो । टाल्सटायले आफू भर्खर बीस वर्षको तन्नेरी हुँदा बुर्‍यातिया (मंगोलियासँग सिमाना जोडिएको पूर्वी साइबेरियामा पर्ने रुसको एक प्रदेश) का एक बौद्ध भिक्षुबाट अमृत समानको बचन सुनेपछि आफ्नो सारा दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको र जीवनभर अहिंसावादी रहेको रहस्य पोख्छन् । हिन्दु धर्मको प्रसंगमा भने जातपातको भेदभाव हुनु कलंकको विषय मान्दै टाल्सटायले नेपालमा जातीय विभेदको अवस्थाबारे मिनाएभबाट जानकारी लिएको काव्यमा उल्लेख छ । बुद्धको भूमिबाट ल्याएको कुनै बुद्धोपदेश भए सुन्न पाऊँ भन्ने टाल्सटायको अनुरोधमा मिनाएभ गोजीबाट सानो टिपोट झिकेर अवलोकितेश्वरको स्तुति पढेर सुनाउँछन् । यो स्तुतिको काव्यात्मक अनुवाद कृष्णप्रकाशबाटै भएको हो ।
काव्यको अर्को एक दृश्यमा मिनाएभले रुसमा नेपाल विद्याको जग बसालेपछि नेपालबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्वान्हरूको पुस्ता नै हुर्केको र अहिले पनि यस क्षेत्रमा रुसी प्रज्ञाप्रतिष्ठान अन्तर्गतको प्राच्यविद्या संस्थान सक्रिय रहेको देखाइएको छ । ‘मिनाएभको नेपाल यात्रा’ ऐतिहासिक तथ्य, पौराणिक कथा र नेपाली समाजका परम्परागत मान्यता वर्णनले भरिपूर्ण काव्य हो । एक विदेशी विद्वान्को आँखाले देखेको डेढ शताब्दीअघिको नेपालको दृश्यको काव्यात्मक प्रस्तुति नेपाली साहित्यको विविधतामा अवश्य नै एक अनुपम योगदान हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:०४
‘आदिकवि’ कविते कामी र ‘राष्ट्रकवि’ सोतांगे जेठालाई सम्बोधन
समाजका अरु सदस्यले आ–आफ्ना काम गरेजस्तै कविहरु कविता लेख्छन्, बस् त्यति हो ! कविता छुट्टै केही होइन । ‘कविता छुट्टै केही हो’ भन्ने विचारले कविहरुलाई समाजको इपिसेन्टरतिर होइन, दायित्वको ग्राभिटीभन्दा बाहिर धकेल्छ ।
कविते कामी र सोतांगे जेठा समाजकै जराबाट उम्रिएका अलिखित अक्षरहरू थिए । उनीहरूको जस्तो जीवन वा प्रत्यक्ष आजीविकाद्वारा लेखिएको कविता मैले आजसम्म पढेकै छैन ।
माघ १, २०७८ भूपाल राई
म्याक्सिम गोर्कीले संस्कृतिमाथि दिएको परिभाषा कतै पढेपछि कवितालाई हेर्ने मेरो आँखामा दोस्रो चस्मा फेरिएको हो । उनी भन्छन्, ‘संस्कृति भनेको मानव श्रमद्वारा निर्मित दोस्रो प्रकृति हो ।’ पहिलो प्रकृति प्राकृतिक हो, जसलाई पृथ्वीका सारा जीवजन्तुले जस्ताको तस्तै उपभोग गर्छन् । प्रकृतिबाट प्राप्त आजीविकाका सारा कच्चा वस्तुलाई उनीहरू कच्चा अवस्थामै प्रयोग गर्छन् । तर, मान्छे मात्रै त्यस्तो जीव हो, जसले प्रकृतिलाई आफ्नै अनुकूलतामा ढाल्छन् ।
सजिलोका लागि यसो भनौं, उनीहरू प्रकृतिबाट प्राप्त वस्तुलाई वस्त्रमा बदल्छन् । प्रकृतिको कच्चा खाद्यान्नलाई आफ्नो रुचिअनुसारको तयारी परिकारमा बदल्छन् । प्रकृतिलाई भाषामा, ज्ञानमा, संज्ञानमा बुझ्छन् । उनीहरू सोच्छन्, चिन्तन गर्छन् । यो नै मानवनिर्मित दोस्रो प्रकृति हो, जो संस्कृतिको रूपमा विकसित भयो । यसरी संस्कृति प्राकृतिक होइन, निर्मित हो ।
यसबाट सारतः दुई मजबुन निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, संस्कृति निरन्तर मानव चिन्तन प्रणालीको उपज हो । दोस्रो, यो सामाजिक श्रमको निर्मिति हो । र, कविता पनि मानव निर्मित संस्कृतिकै एक अंश भएको हुनाले यसलाई माथिका दुई मजबुनकै सारतत्त्वमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयको संज्ञानात्मक परिणाम हुनाले कविता मानव चिन्तन प्रणालीभन्दा पर छैन । साथसाथै समाजले निर्माण गरेका कच्चा भाषा र कच्चा अन्तरवस्तुलाई नै व्यक्तताको तयारी परिकारमा बदल्ने कार्य हुनाले कविता सामाजिक श्रमको कडी पनि हो । त्यसैले कुनै कविता त्यतिखेर मात्रै बोधगम्य हुन्छ, जति त्योभन्दा अगाडि त्यसको सामाजिकता बुझिएको हुन्छ । त्यसको समाजशास्त्र केलाइएको हुन्छ ।
आँखामा दोस्रो चस्मा फेरिएपछि मैले देखेको कविताको यथार्थ यही सामाजिकता हो, जसबारे त्यसभन्दा अगाडि सम्भवतः केही भिन्न खालको बहस हुन्थ्यो । सुनिन्थ्यो, कविहरू समाजको सरोकारक्षेत्रभन्दा नितान्त बाहिर विचरण गरिहिँड्ने त्यस्ता काट्टिएका पखेटाहरू हुन्, जसको सरोकारको विषय केवल आकाश हो, धर्ती होइन । सम्भवतः कवितालाई हेर्ने अघिल्लो चस्माद्वारा निर्मित यो धारणाले कविहरूलाई असामाजिक ठहर गरेको थियो । तर, दोस्रो चस्माले भन्छ, मान्छेका सारा चिन्तन प्रणाली सामाजिक श्रमकै उपज हो । र, कविता चैतनिक श्रमकै उपदान हुनाले त्यो समाजभन्दा बिलकुल भिन्न छैन । यहि अभिन्न बोधका कारण आजसम्म बनेका सबै शास्त्र र शास्त्रीय व्याख्याभन्दा थोरै छेउ लागेर अचेल म कवितालाई सम्बोधन गर्छु । त्यसैले कविता मेरा लागि अब छुट्टै साधनाको विषय रहेन । समाजमा एउटा डाक्टरले जति श्रम गरेर डाक्टर बन्छ मेरो साधना त्यति हो, वा त्यस्तै त्यस्तै हो । एउटा इन्जिनियरले वा कुनै मजदुरले जति समय लगानी गरेर त्यो बनेको हुन्छ मेरो तपस्या त्यति हो । अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने समाज निर्माणको तराजुमा तिनीहरूको योगदान जति छ कविहरूको त्योभन्दा कम छैन । समाजका अरू सदस्यले अरू अरू काम गरेजस्तै कविहरूले कविता लेख्छन्, बस् त्यति हो । त्यो छुट्टै केही होइन । यसले कविहरूलाई दायित्वको ग्राभिटीभन्दा बाहिर होइन, समाजको इपिसेन्टरतिर धकेल्न मद्दत गर्छ । अब म प्लेटोले आफ्नो गणराज्यबाट निष्कासन गरेको दुई हजार वर्षपछाडि कविहरूलाई उनीहरूकै समाजमा फर्काउन चाहन्छु ।
कविताको चस्मा विवेचनापछि अब भने आजको शीर्षस्थ विषयतिरै लागूँ, जसको सांकेतिक खाता शीर्षकमै खोलिसकिएको छ । सन्दर्भ छ, मेरो पहिलो कविताको । यद्यपि मलाई थाहा छैन कुनै कविको पहिलो कविताको चर्चा समाजका लागि कति आवश्यक छ ? अर्थात् त्यसको भ्रूणकथाले कसैका लागि महत्त्व कति राख्छ ? तैपनि यस्तो प्रश्न अक्सर सोध्ने गरिन्छ । मलाई पनि अनेक पटक सोधिएको छ । त्यही प्रश्नको जवाफहेतु अब म शीर्षकको विषयतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु ।
कुरा सुरु गर्नुअघि सर्वप्रथम दुई कुरा प्रस्ट पारिहालौं ।
एक, यो दशकौं पुरानो चिहानबाट उठेको एक निस्चेष्ट उद्बोधन हो । अर्थात् चिहानबाट पैदा भएको एउटा क्षीण आवाज । चिहान– एक अनाम कविताको । अर्थात् मेरो जीवनकै पहिलो कविताको, जो कतै सुषुप्त अवस्थामा मभित्र चिरस्थापित छ । अर्थात् मेरो मानसको धूमिल पत्रभित्र, जसको अक्षर तथा कागजरूपी भौतिक अवशेष कतै छैन ।
दुई, त्यो चिहानबाट सुरु हुने कथामा त्यस्ता दुई अभियुक्त छन्, जसले मेरो त्यो पहिलो कविताको निर्माणमा निस्फल योगदान दिएर एक अक्षम्य अपराध गरेका छन् । त्यसैले मेरो पहिलो कविताको सन्दर्भ उठ्नासाथ उनीहरू हठात सम्झनामा आइहाल्छन् । उनीहरू मेरो बाल्यकालको सामाजिक–सांस्कृतिक साक्षीहरू हुन । उनीहरूले अनजानमै मेरो बाल मानसभित्र सुषुप्त अवस्थामा रहेको कवित्वको टुसालाई कोट्याउने काम गरेका छन् । म आफैंलाई थाहा थिएन न उनीहरूलाई नै थाहा थियो, कविताको त्यो अनजान टुसा, जुन आगामी दशकभित्रै कलिलो बेर्नाको रूपमा प्रकट हुनेवाला थियो, त्यसैलाई उनीहरूले हावाको सानो झोक्काले हिर्काएका छन् । उनीहरूले यसरी एक अन्तर्मुखी, तर सुखी केटोलाई कविताको शुष्क र दुःखद मार्गतिर अभिप्रेरित गर्ने जघन्य अपराध गरेका छन् । उनीहरू मेरो जीवनको निर्दोष अपराधीहरू हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई मैले यहाँ अभियुक्त करार गरेको छु ।
यति कुरा प्रस्ट पारिसकेपछि मान्नोस्, मेरो यस यात्राको ढोका अब खुल्यो ।
– ‘तपाईंको पहिलो कविता कुन हो ?’
– ‘र, कुन उमेरमा लेख्नुभयो ?’
यात्राको ढोका बस् यिनै दुई प्रश्नबाट खोलूँ, जुन अक्सर मलाई सोधिएको छ/सोधिने गरिन्छ । अर्थात् म आज जुन आलेखको यात्रामा छु, खास यिनै प्रश्नको कारणले छु । नचाहँदा नचाहँदै पनि कैयौं पटक सोधिने यिनै प्रश्नले मलाई यति लेख्न बाध्य पारेका छन् । सोचिरहेछु, अब मैले यिनीहरूको एकमुष्ट उत्तर दिनैपर्छ ।
एकछिन गम खानोस्, एक कवि हुनुको हैसियतमा अनेक पटक सामना गर्नुपर्ने प्रश्न के यही हो ? जसको सामना अरू धेरैले पनि गरेका होलान् । तर, अरू धेरैसँगजस्तो प्रश्नको बनिबनाउ उत्तर मसँग कहिल्यै थिएन । अध्यावधि छैन । किनभने प्रश्नले उत्खनन गर्न खोजेको त्यो पहिलो कविताको कुनै नाम मसँग सम्झनामा छैन । न छ त्यसको कुनै आदि अन्त्य । न कुनै पाउ वा पंक्तिको अवशेष । मात्र बाँकी छ आफ्नै मानसभित्र त्यसको भत्किसकेको चिहान र त्यही चिहानको धूमिल याद । यसरी आफैंभित्र एक जर्जर चिहानको धूलोबाहेक जसलाई प्रमाणित गर्न मिल्ने अक्षर र अर्थको कुनै भौतिक अवशेष छैन, त्यसको एक थान सग्लो उत्तर हुने कुरै भएन । बरु अनेक ठाउँ अनेक पटक त्यसका अनेक उत्तरहरू भए होलान् । अनेकचोटि मैले कपोलकल्पित उत्तरको सहारा लिएँ होला ।
कहिलेकाहीँ लाग्छ, यस्तो प्रश्न किन गरिन्छ ? के यो त्यति आवश्यकीय प्रश्न हो ? अथवा के यो त्यस्तो प्रश्न होजस्तो कि कसैलाई सोधियोस्– तिम्रो जीवनकै प्रथम पाइला कुन हो ? के आमाको काखबाट निवृत्त प्रथम पाइला र कुनै कथित पहिलो कविता एउटै हो ? प्रथम पाइलाबाट सुरु भएर बाँचुन्जेल नछुट्ने जीवनको नैरन्तरताजस्तै हो र कविता ? के कुनै कविलाई जस्तै कुनै सिकर्मीलाई यो सोधिन्छ कि तिमीले बनाएको पहिलो कुर्सी कुन हो ? या कुनै सर्जनलाई सोधिन्छ कि तिमीले चिरेको पहिलो पेट कसको थियो ? यदि सोधिँदैन भने एक कविमाथि मात्र यत्रो भार किन ? किन कविलाई अरूभन्दा छुट्टै डिलमा राखेर हेरिन्छ ? मलाई लाग्छ, यही छुट्टैपनको बरतावले कवितालाई अरू सबै मानव श्रमबाट अलग राखेको छ । यही भावले कवितालाई लामो समयसम्म समाजबाट टाढा राख्ने काम गर्‍यो । जनताको सम्बन्धबाट च्युत गरेर जनताकै हुनबाट त्यसलाई रोक्यो ।
अर्को कुरा, ल ठीक छ, कसैको पहिलो कविता या त्यस्तो कुनै दुर्लभ कर्म पत्ता लाग्यो रे ! तर, त्यो पत्ता लागेको दुर्लभ कुरासँग समाजले राख्ने अर्थ के हुन्छ ? र, कसैले कवितादि कर्म कुन उमेरबाट लेख्न सुरु गर्‍यो भन्नेसँग समाजले के सरोकार राख्छ ? मानूँ, कसैले कविता सानै उमेरमा लेख्यो रे ! महाकाव्य या उपन्यास (जुन काम गर्नेलाई अचेल सेलिब्रेटी मानिन्छ) नै तयार गर्‍यो रे ! के त्यसो भए ऊ समाजभन्दा माथिको चीज भैगयो ? माथिको दोस्रो प्रश्नको उत्तर नढाँटी दिने हो भने आफ्नो कथित पहिलो कवितासँग मेरो पनि १२/१३ वर्षकै उमेर जोडिन गएको हो । र, सम्भवतः कविताका लागि यो सानै उमेर पनि हो । के त्यसो भए म अरू धेरै मान्छेभन्दा विशेष भैगएँ ?
बुझ्नुपर्ने कुरा, उमेरको सानोपनसँग परिपक्व कविताको कुनै साइनो छैन । कच्चा उमेरले लेख्ने विषय समाजको परिपक्क कविता हुँदै होइन । यो ‘अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट टुर्नामेन्ट’ जस्तो विषय होइन । यो त परिपक्व उमेर र समाज विमर्शले उत्पादन गर्ने विचारको फसल हो । त्यसैले म अब माथिको त्यो दोस्रो प्रश्नलाई यहीँनिर खारेज गर्न चाहन्छु । आफ्नै कथित सानो उमेरलाई समेत खारेज गरेर मेरा सम्पूर्ण कवितालाई छुट्याउन चाहन्छु ।
भनिसकेँ मसँग मेरो पहिलो कविताको आफैंले खुट्याउन सक्ने कुनै अनुहार छैन । कुनै नाक नक्सा छैन । शब्द र वाक्यरूपी हड्डी–मासुको सानो अवशेषसम्म छैन । एउटा कपालको केस्रासमेत बँचेको छैन । छ त मात्र त्यसको असामायिक मृत्युको विषाद र आफैंभित्र रहेको त्यसको चिहानको क्षीण आभास छ । त्यसले बयान गर्न खोजेको दुःखको झल्को छ । शब्द र अर्थभन्दा धेरै पर कतै धूवाँजस्तो उडिरहेको आफ्नै बालापनको कथा छ । र, सबभन्दा बढी, सबभन्दा टड्कारो त्यही पहिलो प्रश्न छ– ‘तपाईंको पहिलो कविता कुन हो ?’
आउनोस्, अब फेरि कुनै फुटकर उत्तरको दरकार नपर्ने गरी त्यसको अन्तिम उत्तरतिर जाऊँ ।
उत्तर तयारि गर्नुअघि, पहिले ती दुई पात्रको परिचय नदिई नहुने हुन्छ, जसलाई मैले सुरुमै अभियुक्त करार गरेको छु । ती दुई अभियुक्त, जसले मेरो पहिलो कविताको भ्रूण निर्माणको काम गरेका छन्, तिनीहरूको चर्चा नगरी यो आलेख अपूर्ण मात्रै होइन अर्थहीनसमेत हुन जान्छ । त्यसैले आउनोस् पहिले ती दुई अभियुक्तसँग चिनापर्ची गरौं ।
पहिलो अभियुक्त : कविते कामी
तीसको पूर्वार्द्ध दशकको एक वयस्क मान्छे । तर, ‘कविते’ उसको सक्कली नाम होइन । उसको सक्कली नाम रघुवीर विश्वकर्मा । तर, सबैले भन्थे– केवल ‘रघे’ । भोजपुर जिल्लाको पूर्वोत्तर कुनामा एउटा पुरानो गाउँ छ, याकु जिमिगाउँ । मेरो मामाली गाउँ, जहाँ बसेर म पढ्ने गर्थें । त्यहाँ एउटा ठूलो डम्म बसेको मलिलो फाँट छ । त्यसमा राईहरूको घना बस्ती छ । त्यही राई बस्तीको उत्तरी सिरानमा अवस्थित छ– एउटा भिरालो पाखा, जसलाई ताकमारे पाखा भनिन्छ । त्यही पाखाको रैथाने बासिन्दा थियो ऊ । त्यो भिरालो पाखामा उसको सानो फुसको घर थियो । केही भुराभुरीहरू थिए । फलाम र आरनको कारिन्दा थियो ऊ । फुर्सदमा स्वास्नी पछाडि लाएर राई गाउँतिर झर्नु उसको सधैंको दिनचर्या बन्थ्यो । ऊसँग एउटा रेडिमेड जवाफ थियो– ‘बिष्टको घर, दुःखीको भर ।’
अँ त ‘कविते’ उसको सक्कली नाम थिएन । त्यो उसले आफ्नै खुबीले आर्जन गरेको नाम थियो । ऊसँग यस्तो एउटा खुबी थियो जस्तोसुकै विषयलाई पनि ऊ तत्कालको तत्काल एक किसिमको लयात्मक छन्दमा ढाल्न सक्थ्यो । उस्तै परे मानिसहरूसँग त्यही छन्दमा सवाल–जवाफ गर्न सक्थ्यो । हरेक घटना र परिस्थितिलाई ऊ तुरुन्तै त्यस्ता पंक्तिहरूमा बयान गर्न सक्थ्यो । मानिसहरू त्यस्ता पंक्तिलाई कविता भन्ने गर्थे । ताकमारेबाट झरेको बेला बिष्टहरूको प्रत्येक घरमा ऊ हाजिर भएकै हुन्थ्यो । र, प्रत्येक घरको तत्कालीन स्थिति आकलन गरेर हिँड्ने बेला प्रत्येक पटक एउटा न एउटा कविता छाडेर हिँड्थ्यो । यही विशिष्ट खुबीको कारण उसले नाम पाएको हो– ‘कविते’ । न्वारानमा उसको नाम रघुवीर थियो । समाजले रघुवीर बिर्सेर ‘रघे’ बनाइदियो । अलि पछि रघे पनि बिर्सेर कविते बनाइदियो । झन्पछि ‘कविते’ माथि ‘कामी’ थपिदियो । अब ऊ ‘कविते कामी’ भयो । यही नामसँग ऊ तत्कालीन समाज व्यवस्थाले बनाएको एउटा ‘हाइरार्की’ बाँचिरह्यो । स्वाभाविक थियो, समाजले उसको कवितालाई पनि उसकै दर्जामा राखेर हेर्ने भैगयो । उसको कविता वा टुक्का मानिसहरूका लागि हास्य प्रसाधन थियो । तर, अनौठो संयोग, यही ‘कविते कामी’ मेरो लागि भने छुट्टै भएर निस्क्यो । ऊ मेरो पहिलो कविताको भ्रूण–कथासँग जोडिन पुग्यो ।
दोस्रो अभियुक्त : सोतांगे जेठा
राई गाउँको बीचमा घर थियो निजको । उमेरले ऊ पहिलो अभियुक्तभन्दा अलिक प्रौढ । तर, ‘सोतांगे जेठा’ उसको पनि असली नाम थिएन । उसको असली नाम चन्द्रबहादुर राई थियो । सम्भवतः उसको पुर्खा सोलुको सोताङतिरबाट त्यो गाउँमा आएर बसेको हुनाले उसलाई सोतांगे भनिएको थियो । तर, उसको नामलाई विद्रूपीकरण गरेर ‘चन्द्रे’ भनिएको कहिल्यै सुनिएन, जसरी कसैलाई सजिलैसँग ‘रघे’ भनिन्थ्यो । बरु उसले सम्मानका साथ ‘सोतांगे जेठा’ भन्ने अर्को वैकल्पिक नाम पाएको थियो । यो किनभने ऊ समाज–पिरामिडको एक तलामाथिको मान्छे थियो । ऊ राई थियो । विश्वकर्मा थिएन ।
उसका एक जोडा छोरा थिए । तत्कालीन समाजको विश्वासअनुसार, धेरै छोराछोरी मरेर गए भने नराम्रो र हेय नाम राख्दा बाँकी सन्तान बाँच्नेछन् । जस्तै ः गुहे, गन्धे, धार्ने, डल्ली, ओख्ली इत्यादि । यस्तो नाम राख्यो भने कालले पनि घिनाएर छुँदैन भन्ने विश्वास थियो । त्यसैले उसको ठूलो छोराको नाम ‘गुहे’ राखिएको थियो । ऊ भन्थ्यो– छोराको नाम ‘गुहे’ राखेपछि बाँकी दुई सन्तानहरू रहेका हुन् । मानिसहरू उसलाई यदाकदा ‘गुहेको बाउ’ वा ‘गुहेम्पा’ पनि भन्थे । यो उसको अर्को सम्मानित नाम थियो ।
ऊ हिउँद हिउँदमा फेरवाले काम गर्न मधेस झर्ने गर्थ्यो । फेरवाले भन्नाले यताको सामान उता लगेर बेच्ने र उताको सामान यता ल्याउने । कहिलेकाहीँ झापाको माईबेनी मेलामा झरेर खोर्सानी, सिद्रा आदि बेचेर घरको खाँचो टार्ने गर्थ्यो । उसको सानो छोरा गनेस मसँगै पढ्थ्यो, मेरै वयको । अक्सर स्कुल छाड्ने/जोडिने गरिरहे पनि गनेस मेरो मिल्ने साथी थियो । त्यसैले उसको घरको आँगन मेरो नियमित खेल्ने मैदान थियो ।
सोतांगे जेठा कवितेजस्तै टुक्काबाज त थिएन, तर संयोगले यस्तो गरायो कि ऊ पनि मेरो पहिलो कविताको दोस्रो सूत्रधार बन्न पुग्यो । एउटा अनौठो कुरा, दुवै अभियुक्त सामाजिक हैसियतको तराजुमा समान थिएनन् । पहिलोलाई समाजले अछुत मान्थ्यो दोस्रोलाई छुत । तर, कविता यस्तो विषय थियो, जसको लागि ती दुवैको भूमिका समान थियो । बराबर थियो । कविताले समाजको त्यो कथित भेद मान्दैनथ्यो ।
दुई अभियुक्तको संक्षिप्त परिचय त लगभग सक्कियो । तर, तिनीहरूको अपराध के थियो ? अब त्यो पनि हेरूँ ।
भनिसकेँ सोतांगे जेठाको आँगन मेरो नियमित खेल मैदानजस्तै थियो । स्कुल बिदाका दिन उसको सानो छोरा र मेरो भेट अनिवार्यजस्तै हुन्थ्यो । यस्तैमा एक दिन हामी खेलिरहेका थियौं । अचानक कविते अर्थात् मेरो पहिलो अभियुक्त सोतांगेको सिकुवामा आएर टुक्रुक्क बस्यो । निकै बेरसम्म दुई बीच भलाकुसारी चल्यो । केके वार्तालाप भयो त्यतातिर फुच्चे खेलाडीहरूको चासो जाने कुरै भएन । तर, हिँड्ने बेला कवितेले जे भन्यो, त्यसले अचानक मेरो ध्यान खिच्यो ।
भनिरहेको थियो– ‘हजुर, एउटा टुक्का यस्सो सुनाउँ कि ?’
‘सुना... सुना...’– सोतांगे जेठाले अनुमति दियो ।
तब कवितेले उसको नैसर्गिक खुबीअनुसार तत्कालै भट्याइहाल्यो–
‘पहाडैबाट ‘गुहेको बाउ’ झर्‍यो माईबेनी मेलैमा
जति फूल फुल्छ त्यति फूल झर्छ नहुने बेलैमा’
त्यो सुनेर सोतांगे जेठा यस्तो क्रुद्ध देखियो कि अचानक ट्रिगर दबाएको बन्दुकझैं पड्क्यो– ‘साला गधा, अन्त्यमा कोही नपाएर मलाई नै छ्याँस्ने काम गरिस् !’ त्यसपछि उसले कथित तल्लो जातका लागि समाजले निर्माण गरेको सबै गाली फलाक्दै कवितेलाई त्यहाँबाट लघार्‍यो । लगत्तै कविते त्यहाँबाट सुइँकुच्चा ठोक्यो ।
घटना हेरिरहेको मैले त्यहाँ अरू के भइरहेको थियो, त्यो त खास बुझिनँ । तर, मलाई किन हो किन कवितेको त्यो टुक्काले भने अनौठो ढंगले आकर्षण गर्‍यो । मलाई केही थाहा थिएन खास त्यो के थियो ? या त्यसले भन्न खोजेको के थियो ? के त्यो कुनै कविता नै थियो ? थाहा थिएन त्यसमा वर्णित गुहेको बाउ, माईबेनी मेला, फूल आदिले संकेत गर्न खोजेको के थियो ? तैपनि किनकिन त्यसले मभित्रको अन्तरमा कताकता केके हल्लाएझैं महसुस हुन गयो ।
अहिले सम्झिन्छु, सोतांगे जेठाको पारिवारिक स्थिति, उसको आर्थिक अवस्था, बाध्यताले निर्देश गरेको उसको जीवनचर्या मात्र एक पंक्तिमा कति सजिलै उसले चित्रण गर्न सकेको ! दुई छुट्टाछुट्टै अर्थमा अभिव्यक्त फूलको त्यो बिपर्यास विम्बको प्रयोग, त्यो अर्थ–सामाजिक व्याख्या । ओहो ! त्यो एउटा सानो पंक्ति कहिल्यै नमेटिने छिपा भएर बस्यो मेरो मानसपटलमा । त्यसले साँच्चि नै पहिलोचोटि म आफैंभित्र पनि त्यस्तै केही छ भन्ने बोध गराएरै छाड्यो । कवितेले अनजानमा यही एउटा अपराध गर्‍यो ।
त्यसपछि कति समय बित्यो हेक्का रहेन । त्यो बीच फेरि कविते त्यो घरमा फर्क्यो, फर्केन पत्ता भएन । कतिऔँ हप्ता या कतिऔँ महिनापछि फेरि म उसै गरी त्यही आँगनमा खेलिरहेको थिएँ । अचानक फेरि कविते टुप्लुक्क आइपुग्यो ।
उसलाई देखेर पुरानै गालीमिश्रित लवजमा सोतांगेले भनिहाल्यो– ‘फेरि आइस् तँ साले, कविते ?’
उसले पनि आफ्नो पुरानै लवजमा जवाफ फर्कायो– ‘नआएर के गर्नु हजुर ! बिष्टको घर, दुःखीको भर...।’
त्यसपछि फेरि उही गलफत्ती । उही भलाकुसारी । उही सुर्ती बिँडी, उही जाँड पानी । निकै बेरपछि ऊ बिदा भएर हिँड्यो । खै किन हो यसपटक उसले टुक्का जोडजाड गर्ने जाँगर देखाएन ।
घरदेखि माथिल्लो बारीको डिलमा ऊ के पुगेको मात्र थियो, अचानक केही सम्झेझैं गरेर सोतांगेले उसलाई बोलायो– ‘ए कविते, यता आइज आइज ।’
‘किन हजुर’– भन्दै ऊ फेरि आँगनमा झर्‍यो ।
ऊ छेउमा पुगेको मात्रै के थियो त्यतिबेलै सोतांगेले हतारहतार भन्यो– ‘लौ सुन् तेरो अस्ति... को जवाफ ।’
ऊ आज्ञाकारी भएर ध्यानमग्न भयो । सोतांगेले कति दिन, कति महिना लगाएर बुनेर राखेको जवाफ पोखाइहाल्यो–
‘हिमालै चुली त्यो पल्लोपट्टि नाग र नगेनी
ताकमारेबाट ओरालो झर्छ रघे र रघेनी ।’
त्यो सुनेर कवितेले बिना कुनै प्रतिक्रिया फेरि उही पुरानै कुरा दोहोर्‍यायो– ‘नझरेर के गर्नु हजुर ! बिष्टको घर, दुःखीको भर ।’ त्यसपछि भने ऊ साँच्चि नै उकालो लाग्यो ।
सोतांगे जेठाले त त्यसरी एक टुक्का जवाफद्वारा कति दिनअगाडिदेखिको उकुच शान्त पारेको थियो । तर, उसको जवाफले मलाई भने झन् अशान्त, झन् आन्दोलित गर्‍यो । मभित्रको कविताको सुषुप्त टुसालाई पछिल्लो शृंखलाले झन् बेस्सरी हल्लाइदियो । मलाई त्यतिबेलै लाग्यो यदि यस्तै कुरालाई कविता भनिन्छ भने यो काम मबाट पनि सम्भव कसो नहोला ! किनभने ती दुई जीवन्त पात्र, जसलाई मैले आफ्नै आँखाले भोगेको थिएँ, उनीहरूले नै मेरो मार्ग सहज बनाइदिएका थिए, जसको हेक्का तर उनीहरू स्वयंलाई थिएन । उनीहरू मेरा लागि त्यस्ता ज्युँदा कविहरू थिए, जो कलमको सट्टा जीवनको निबले कविता लेख्थे । ठीक माछाजस्तै, पानीमा खेलेर पानीमै तैराकी कला छाड्ने, तैपनि आफैंलाई थाहा नहुने । उनीहरू समाज दर्शन मात्र होइन समाजकै जराबाट उम्रिएका अलिखित अक्षरहरू थिए । सत्य हो उनीहरूको जस्तो जीवन वा प्रत्यक्ष आजीविकाद्वारा लेखिएको कविता मैले आजसम्म पढेकै छैन ।
यसरी उनीहरूले पालैपालो मलाई भित्रैदेखि हल्लाउने काम गरे । उनीहरूले गरेको अपराध बस् यही थियो । उनीहरूकै अपराधको कारण मलाई कहिल्यै नहिँडेको बाटोतिर पाइला चाल्ने एक किसिमको आँट पलाएर आएको थियो ।
फलस्वरूप मैले त्यो पहिलो कविता लेखेँ । तिनै दुई महान् गुरुहरूकै बान्कीमा, ठ्याक्कै त्यही लय, त्यही छन्दमा– मैले त्यो लेखेँ ।
कविता बारे दुइटा भनाइ बहुप्रसिद्ध छ ।
एउटा हो– उमेरमा जो पनि कवि हुन्छ । अर्को हो– मानिसको पहिलो कवितायात्रा प्रेमबाट सुरु हुन्छ । तर, संयोगले यी दुइटै कुरा ममाथि चरितार्थ भएन । पहिलो कुरा कविता लेख्न मलाई कुनै खास उमेर पर्खिनु परेन । दोस्रो, मेरो पहिलो कविता प्रेमबाट सुरु भएन । बरु मेरो कविता आफ्नै समयको दुःखबाट सुरु भयो । संकष्ट र भयको बयान अनि आफैंले भोगेको भौतिकीबाट सुरु भयो । त्यो कविता, जसलाई मैले आफ्नो पहिलो कविता मानेको छु, अब हेरौँ, त्यसको भावभूमि ठ्याक्कै यस्तो छ ।
३०/३१ सालतिरको कुरा । कक्षा आठतिरको विद्यार्थी थिएँ । भनिसकेँ लगभग १२/१३ वर्षको किशोर । याकु जिमिगाउँस्थित मेरो मामाघरबाट कम्तीमा डेढ घण्टा दूरीमा थियो स्कुल । स्कुलको नाम थियो– विश्वप्रेमी हाइस्कुल । त्यतिखेर दस कक्षासम्म पढाइने स्कुललाई हाइस्कुल भनिन्थ्यो । र, विश्वप्रेमी सारै थोरैमध्येको एउटा पुरानो हाइस्कुल थियो । स्कुल जाने दिन जहिले पनि म बिहानैदेखि चिन्ताग्रस्त हुन्थेँ । त्रसित हुन्थेँ । यसका दुई कारण थिए ।
एक, स्कुल एकदमै टाढा थियो । ठीक दस बजे हुने ‘प्रेटाइम’ मा पुग्न जहिले पनि हम्मे पर्ने । गाउँको ठाउँमा अक्सर समयमा खाना पाक्न गाह्रो हुन्थ्यो । खाना पाक्नासाथ भारी पेटमा झोला टिपेर दौडिहाल्नुपर्थ्यो । मेरो चिन्ता अक्सर बिहानको नौ बजेबाट सुरु हुन्थ्यो । घडी हुँदैनथ्यो । आँगनमा तेल पेल्न राखेको ठूलो ढुंगामा धुरीबाट चियाएको घाम झरेपछि मेरो नौ बज्थ्यो । त्यसपछि मलाई एकदमै हतार हुन्थ्यो र हरेक बिहान पसिना पुछ्दै पाखाघरको ठाडो उकालो चढ्नुपर्थ्यो । यसरी जाँदा डेढ घण्टा र आउँदा डेढ घण्टा गरि दैनिक तीन घण्टा लाग्ने त्यो लम्बेतान बाटो मैले पूरै दस वर्ष हिँडेर नापेको छु ।
दुई, बाटो एकदमै अत्यासलाग्दो थियो । पाखाघरको उकालो चढेपछि गाउँ सिद्धिन्थ्यो । त्यसपछि सुरु हुन्थ्यो अनकन्टार जंगल । गहिरो र अँध्यारो खोला खोल्सी । छाबुक (मृत बच्चाहरू राख्ने ठाउँ) को कहालीलाग्दो भीर । बीचमा थियो बाटैमा जोडिएको एउटा ठूलो चिहानघारी । हतारका कारण स्कुल जाने साथीहरू प्रायः कहिलै पनि सँगै पर्दैनथे । रातभरि भूत–प्रेत, तर्साउने र मरेको मान्छेको कथा सुन्नुपर्ने परिवार/समाज । म हरेक दिन त्यो एक्लो र एकलास बाटोमा पर्ने चिहानघारी पुगेपछि सास न बास हुन्थेँ । केही कुराको सानो आहट या पात खसेको आवाजले समेत तर्सिन्थेँ । अक्सर कहिलेकाहीँ त्यहाँ आलो चिहान पनि थपिएको हुन्थ्यो । त्यहाँ पुगेपछि म कहिले सासै नफेरी दौडिन्थेँ । कहिले आलो चिहान हेर्दै उल्टो पाइला चालेर पछाडि सर्थें । यसरी जसोतसो एक दिनका लागि त्यो डरलाग्दो चिहानघारीबाट मुक्त हुन्थेँ । म सम्झिन्छु, मेरो त्यतिखेरको दैनिकी पठनपाठनको अलावा त्यही अत्यास, डर र मुक्तिको खोजमा बित्ने गर्थ्यो । ठीक त्यही डरलाग्दो कथ्यको जमिनमा, त्यही भौतिक दुःख या कष्टप्रद बाटोको बयानबाजीमा मैले त्यो पहिलो कविता लेखेको थिएँ । यतिखेर, जतिखेर मसँग त्यसको कुनै नाम निसाना छैन, अहिले लाग्छ, त्यसको शीर्षक ‘स्कुल जाने केटो’ या ‘स्कुलको बाटो’ यस्तै केही हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो नाम पनि मैले उबेला राखेँ कि राखिनँ त्यो पनि मलाई याद छैन । यत्ति याद छ, मैले त्यो कविता पहिलो र अन्तिमचोटि छेउघरका भरिमान मामालाई सुनाएको थिएँ । मलाई थाहा छैन ती मामा अहिले जीवित छन् कि छैनन्, तर उनी नै मेरो कविताको पहिलो श्रोता हुन्, यति थाहा छ । त्यसपछि त्यो कविताको अक्षर–कपी के भयो ? कहाँ हरायो ? केही सम्झना छैन । न कहिल्यै मैले त्यसलाई सम्झेँ । न खोजी नै गरेँ । लाग्छ, कतै त्यो हराउनुको पछाडि ती दुई अभियुक्तहरूकै सजीव छाया त कारक थिएन ! जसको अगाडि मैले सायद आफूलाई खरो उतार्ने आँट गरिनँ । के उनीहरूकै छायाका कारणले मलाई आफ्नै कविताको चैं आधा पंक्ति पनि याद रहेन ? या यस्तो पनि हुन सक्छ, म आफ्नै निकट आगत बारे जानकार थिइनँ, जसले गर्दा मैले त्यसको भावी मूल्यलाई आँक्न सकिनँ ।
जे होस्, मैले लेखेको तर आफैंसँग नरहेको त्यो पहिलो कविताको भावभूमि हुबहु यही हो । यति भएपछि मान्नोस्, त्यो सक्कली कविता पनि यही हो । त्यो पहिलो प्रश्नको अन्तिम र एकमुष्ट उत्तर पनि यही हो । बस् यही नै हो ।
र, अब आजको यो आलेख–यात्रा पनि यत्तिमै सक्कियो । मात्र त्यसको धूमिल चिहानसँग जोडिएका दुई कुरा भने मेरो मानसपटलभित्र सधैंलाई बाँकी रहने भयो ।
एक, त्यो डरलाग्दो चिहानघारी, जसले मलाई आज पनि यत्रो समयको अन्तरालपछि पनि सपनामा अक्सर तर्साइरहन्छ । सपनामा त्यो चिहानघारी देखेको दिन अझै पनि ब्युझँदा मलाई खलखली पसिना छुटिरहेको हुन्छ ।
दुई, ती दुई अभियुक्तहरू, जो आफैं तत्कालीन समयका जीवित कविताहरू थिए र जसलाई बुझ्न कुनै किताबी ज्ञान होइन त्यही समाजको पाठ्यक्रम काफी थियो । उनीहरूमध्ये एक कविते कामी मेरो जीवनकै पहिलो आदिकवि थियो । र, अर्को सोतांगे जेठा थियो पहिलो राष्ट्रकवि !
प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:०५
बढ्दो विनाशबीच ‘न्यु होप’
माकुरे जालोमा अल्झिएको संसार
रेडियोदेखि रेशमसम्म !
किन महिलाकै मात्र थर परिवर्तन ?